Iindaba - Uyintoni umahluko wencasa yetumato kunye neetchup?
Uyintoni umahluko wencasa yetumato kunye neetchup?
Xa sisenza iitumato ezityumkileyo zibe yincasa engqindilili kunye nokufana okuxineneyo, le fomu yaziwa njenge-tomato paste. Singayisebenzisa le ncamati yetumato kwiintlobo ezahlukeneyo zokutya kunye neeresiphi ezahlukeneyo ngokunjalo. Oku kunika incasa yokwenyani ngegumbo, isuphu, isityu, imbiza eyosiweyo njl.
Izinto eziyimfuneko kwietumato ketchup kuqala ziitumato kunye neviniga, iswekile kunye nezinye iziqholo. Namhlanje, i-tomato ketchup ibe yinxalenye ebalulekileyo yeetafile zedinning kwaye inika incasa emnandi ngokutya okukhawulezayo okunje ngeeburger, iichips kunye nepitsa.